Hery Rajaonarimampianina : « TSY MAHAMAIKA NY FANOVANA GOVERNEMANTA » -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : « TSY MAHAMAIKA NY FANOVANA GOVERNEMANTA »
“Fampandrosoana ny firenena izao no mahamaika”. Io no valintenin’ny Filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampiaina, rehefa nanontanian’ny mpanao gazety mikasika ny fanovana ny mpikambana sy ny governemanta mihitsy. “Tsy tokony hino ny tsaho aely etsy sy eroa ary voizin’ny sasany hatrany isika amin’izany fanovana governemanta izany”, hoy ny filohan’ny Repoblika.
Nambarany mantsy fa mbola tsy hirotorotoana izany fanovana ny governemanta izany. “Mbola maro ny zavatra atao mialoha izany ary mbola misy koa ny famakafakana sy fandinihina lalina amin’izany fa tsy avy hatrany dia miroso amin’ny fanovana ny mpikambana eo anivon’ny governemanta isika”, hoy hatrany ny Filoha.
Voalaza mantsy fa ao anatin’ny asa fampandrosoana maharitra sy maika ny fitondram-panjakana amin’izao fotoana izao. Izay indrindra no nahatonga ny filoha Hery Rajaonarimampianina nilaza fa taorian’ny fahazoantsika famatsiam-bola tamin’ny fihaonan’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena tany Paris, France, ka nahazoan’i Madagasikara famatsiana mitentina 10,6 miliara dolara, teo ihany koa ireo famatsiana maro lafy miisa 20 nosoniavina niaraka tamin’i Maraoka, Vietnam, Torkia, Sina, tsy maintsy manangana rafitra ny fitondrana mba ho tody amin’ny tanjona eo amin’ny fampandrosoana haingana. Noho izany, hoy ny Filoha, tsy misy maha maika ary tsy hirotorotoana ny fanovana ny governemanta. “Miasa isika izao, ary miasa miaraka. Samy mandray ny andraikitra tandrify azy ny tsirairay ho fampandrosoana an’i Madagasikara”, hoy hatrany izy.
Ankoatra izay, notsindrian’ny filohan’ny Repoblika ihany koa fa ilaina ary tsy maintsy hapetraka mazava ny politika-pampandrosoana maharitra eto amin’ny firenena. “Efa misokatra amin’ny firenena maro i Madagasikara ary niverina ihany koa ny fahatokisan’ireo mpamatsy vola. Noho izany, hampandroso ny firenena no antom-pisian’ny fitondram-panjakana ankehitriny ary hitsinjo ny vahoaka hatrany”, hoy ny Filoham-pirenena.
Hiarahan’ny rehetra mahalala fa ny faha-7 n’ny volana novambra ho avy izao, dia hanatanteraka fifidianana filoham-pirenena isika eto Madagasikara. Tandindomin-doza noho izany io fanehoan’ny vahoaka ny safidiny io, noho ny fisian’andian’olona milaza hanangana fanjakana hafa. ...Tohiny